Qalabka kaabayaasha Shiinaha ee birta xarkaha warshada xargaha iyo soo saareyaasha | Zhongshuo
CPL waxaa badanaa lagu dabaqaa ka saarida ciladaha yar yar ee iskuxirka qabow ee qoyan ee SS qoyan, helitaanka dhammaynta qurxinta, ie No.3, No.4, HL, SB & Duplo. Kululeyntu waxay noqon kartaa emulsion ama macdanta. Nidaamka shaandhaynta iyo nidaamka dib u warshadaynta ayaa muhiim u ah khadka dhammeystiran. ZS CPL waxaa loogu talagalay isukeeninta qabow isku-talaabinta ah ee isku-wareejinta laga bilaabo 100 illaa 1600 mm ballac ahaan iyo dhumuc u dhexeysa 0.4 illaa 3.0 mm. WUXI ZS sidoo kale waxay bixisaa CPL qalalan. Suunka Cork ayaa loo isticmaali doonaa si loo helo dhammaystirka la mid ah Scot ...
CPL waxaa badanaa lagu dabaqaa ka saarida ciladaha yar yar ee iskuxirka qabow ee qoyan ee SS qoyan, helitaanka dhammaynta qurxinta, ie No.3, No.4, HL, SB & Duplo. Kululeyntu waxay noqon kartaa emulsion ama macdanta. Nidaamka shaandhaynta iyo nidaamka dib u warshadaynta ayaa muhiim u ah khadka dhammeystiran. ZS CPL waxaa loogu talagalay isku-darka qabow isku-darka si ay uga baaraandegaan cabirka 100 illaa 1600 mm ballac ahaanna u dhexeeya 0.4 illaa 3.0 mm.
WUXI ZS sidoo kale waxay bixisaa CPL qalalan. Suunka Cork ayaa lagu dabaqi doonaa si loo helo dhammaystirka la mid ah Scotch-Brite finishing (SB), xawaaraha quudinta ee CPL qalalan waxay noqon kartaa 50m / min ama ka badan.
Faa'iidada ZS CPL
1. Bixiyaha xalka, ZS waxay bixisaa xariiqa dhameystiran oo ay kujiraan Unwinder, Rewinder, Loading Car, Pinch Roll, Flattener, Crop Shear, Maydhka iyo nidaamka qallajinta, coater PVC. Isla mar ahaantaana waxaan bixinaa Nidaamka Filtration iyo Nidaamka Dib-u-warshadeynta, Mist
2. Aruuriyaha, Nidaamka lagula Dagaallamo Dabka iyo Mashiinnada Neefta.
3. Xariiq kama jiraan cilado iyo calaamad sheekeysi
4. Xawaaraha khadka illaa 40m / min ugu badnaan.
5. Khadku wuxuu ku habboon yahay wax soo saar joogto ah 24 saac
6. Heerka Sare ee Automation-ka, ie Loant Load. Nidaamka Raadinta Shabaqa Shaashadda
7. Howlgal iyo dayactir saaxiibtinimo
Nooca qalabka: Xargaha birta ee birta
Awoodda culus ee hubka culus
Dhumucda min / Maxjarka:
Xariiqda fidsan min / ugu badnaan:
Miisaan culeyskiisu sarreeyo
Dhex dhexaadka dhuuban ee dhexroor ka baxsan min / ugu:
Dhexroor xarig gudaha dhexroor:
Miisaan culeyskiisu sareyso ee bixitaanka:
Ka bixi dhexroor dhexroor min / ugub:
Ka bax dhexroorka gudaha:
Max. 40 dib u laabashada.5-35m / min si loo waardiyeysto
Xiga: Korantada iyo Automation-ka ee khadka dhameystiran